नेपाल भर्सेस ओमान, नेपाललाई दोस्रो झड्का, कप्तान खड्का आउट ! [LIVE] - Everest Dainik - News from Nepal
नेपाल भर्सेस ओमान, नेपाललाई दोस्रो झड्का, कप्तान खड्का आउट ! [LIVE]
काठमाडौं, भदौ १३ । एशिया कप छनोटका लागि खेलि रहेको नेपालले खराब सुरुवात गरेको छ । उसले ५० रन पूरा गर्दा महत्वपूर्ण २ विकेट गुमाएका छन् । कप्तान पारस खड्का र सुवास खकुरेलको प्रदर्शन आज खराब रह्यो । सुवास ४ रनमा आउट हुँदा पारस ८ रन बनाएर पवेलियन फर्किए । सुवास रन आउट भएका हुन्, भने पारस एल्बीडब्लूको सिकार ।
याे पनि पढ्नुस ओमानविरुद्ध नेपालको प्रदर्शनः ५ ओभरमा ५ विकेट पतन ! (LIVE)
याे पनि पढ्नुस कप्तान खड्का अर्धशतक बनाएर आउट [LIVE]
ट्याग्स: Cricket Team, nepal vs oman, Parsa khadka